Dadku Waxay u Kalla Sareeyaan Sidda Ay u Kalla Dadaal Badan Yihiin! |
Waa Maxay Xariirka Warbaahinta “Mass communication”?
Cabdijabaar Sh. Axmed, May 2, 2017
Waa Maxay Nafaqo-Daro ‘Malnutrition?
Miski Cabdinuur Salal, October 9, 2019
Taarikh Nololeedkeyga |Tukesomalism.com
Sahal Issaakh, April 3, 2016
Sirta Qoyska Wanaagsan Qeebtii 2aad
Jama Hursow, July 22, 2018
Sheekada Nin Soomaali ah oo Si “Caddaalad arro ah” Loogu Daldalay Britain
BBC Somali, January 29, 2019
Aqoon GuudArrimaha Qoyska & Horumarinta BulshadaWaxbarashada, Caafimaadka & Diinta Islaamka
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 2, 2015
Nolosha aadanaha ma ahan nolol loo wada simanyahay, maxaa yeellay waxaan ku wada noolnahay adduun la kalla sareeyo, balse waxaa isweydiin mudan maxaa keenay kalla sareynta dunidda?
Bulshada caalamka ku nool waa in lawada ogadaa kalla sareynta ma timaado waqti kooban balse waa wax bini’aadamka sameystaan. Aadanaha inay ku wada noolaan qaab oo ay u kalla sareeyaan waa wax Illahay SCW u sameeyay dunidda. Waxaa ku jiro xikmad aad u weyn. In aadanaha kalle sareeyo waa wax soo jireen ah balse su’aasha meesha taalay ayaa ahayd bal maxaa keenay in maanta aadanaha Illahay SCW qalkay ay u kalla sareeyaan? Dadku waxay u kalla sareeyaan sidda ay u kalla dadaal badan yihiin. Waxaa laga yabaa inaad tahay shaqsi aad u caajis badan oo aan jecleen inaad maanta dunidda wax ka qabsato inta aad ku nooshahay. Waxaa macquul ah inaad tahay arday dhigto jaamacad balse hadana aanan fahansaneen qiimaha ay kuu leedahay haddii aad dadaasho oo aad ku dadaasho waxbarashada. Waxbarashada waa horumarka aadanaha, waa caalamadda koowaad ee lagu ogaado inay bulshadaas horumar ku sii tilaabsanayso. Waxaana marwalbo cudur ah inaad waxbarasho u fahanto inaad hesho warqadii loo bixiyay shahaadada. Erayga shahaadada micnihiisa waxaa lagalla jeedaa ‘’cadeyn’’ identity’’ laakiin ma noqoto wax qalbigaada gallay.
Nolosha mar-marka qaar waxaa lagu micneeyaa harka labadiisa gelin. Waa habeen oo waa waqtigii jiifka, waa maalin waa waqtigii shaqada. Adigoo sidaas ah ayaad ka tagaysaa dunidda laakiin waxaa wanaagsan inaad marwalbo naftaada isweydiiso adiga ma waxaad tahay shaqsiga loo shaqeyni lahaa mise midka shaqeyni lahaa? Dhaqaalaha aadanaha ayaa ah in ay isku tiirsanadaan. Midna in loo shaqeeyo mid asiga inuu shaqeeyo.
Waxaad ogataan hadba sidda aad u dadaal badan tahay ayaad horumar sameysaa. Haddii aad doonayso in laguu shaqeeyo oo aad noqoto shaqsi loo shaqeeyo marka horre adiga noqo qof ku guulaystay karaankii shaqada uu lahaa.
Waligaa iska illaali in lagu amro, isku day inaad is amarto adiga. Micnaha hadalkeyga ayaan kaga jeedaa, tusaale ahaan waxaad tahay shaqaalo shirkad oo waxaad ka shaqeysaa xafiis. Xafiiska shaqada u taallo waa inaad ogtahay qaasatan midda adig ku xil saaran. Haddii aad tahay shaqsi yaqaano masuuliyada saaran waxaad ku guulaysanaysaa in aragti fiican kaa qaadan doonaan bulshada aad ku dhexnooshahay qaasatan goobaha aad adiga ka shaqeyso.
Inaad noqoto shaqsi loo shaqeeyo waa wax macquul ka ah noloshada aadanaha. Haddii aad doonayso inaad noqoto shaqsi loo shaqeeyo marka horre adiga is xil saar oo waxaad isku xil saartaa in masuuliyad ay ku saarantahay habba yaratee. Ganacsiga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan oo dadka ay ku taajiraan. Ganacsadaha waa midka loo shaqeeyo asiga. Isku day inaad fahanto karaan shaqada nolosha maanta kaa saaran qaasatan inaad sameysato bayaan hawl oo cadeyn u ah waxyaabaha lagaaga baahanyahay inaad qabato sanadaha soo socdo iyo qaabkii aad ku gaari lahayd. La imaaw aragti midaysan oo ku salaysan habkii aad ku gaari lahayd.
Haddii aad ka welwelsantahay mustaqbalkaada fadlan marka horre noqo qof Illahay SCW ku xeran. Marka labaad raadso shaqsigii aad la tashani lahayd qaasatan qof aad ku kalsoontahay oo aad u sheegani karto sirtaada. Ogaaw dadka isku mid ma ahan, waa inaad kalla taqanaa shaqsiga adiga wax kugu soo kordhini karo iyo midka aan kugu soo kordhini karin. Waxaan kuu rajeynayaa guul wacan nolosha adduun iyo aaqiraba.
Next post Maxay Shabaab u Weerarraan Huteellada?
Previous post Yurub iyo Balkanska oo heshiis gaaray